Guddiga Dhaqaale Dhaqaale ee Beesha Washington ayaa $3.3 milyan ku maalgeliyay afar degmo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dhaqaale Dhaqaale ee Beesha Washington ayaa afar degmo ku maalgeliyay $3.3 milyan
$2 milyan oo deeq ah oo loogu talagalay miyiga ballaaran ee Whatcom oo ka mid ah shan mashruuc oo loo oggolaaday maalgelinta kulanka CERB November.
OLYMPIA, WA - Guddiga Dhaqaale Dhaqaale ee Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa todobaadkii hore ansixiyay $2,431,250 deeqaha iyo $843,750 oo ah deymo dulsaar yar oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, kaabayaasha dadweynaha, iyo horumarinta ballaaran.
Mashruucyada maalgelinta la bixiyo waxay ku yaalaan Cowlitz, Grays Harbor, King, iyo Whatcom counties waxayna kicin doonaan kobaca ganacsiga, shaqo abuurka iyo isku xirka internetka xawaaraha sare leh.
Degmada Cowlitz - $ 843,750 oo deyn ah iyo $ 281,250 oo deeq ah Dekedda Woodland ee mashruuca "Rose Way Industrial Park Building #1" mashruuca. Mashruucani wuxuu ka kooban yahay dhisme 15,000 oo cag laba jibaaran ah, oo ay ku jiraan abaabulka, shaqada dhulka iyo darajooyinka; fidinta iyo isku xirka biyaha, bulaacada iyo nidaamyada biyaha roobka; adeegyada; meel baabuurta la dhigto, jidadkeeda iyo jidadkeeda. Mashruucan ayaa la filayaa inuu abuuro 40 shaqo oo ka sarreeya mushaharka dhexe ee degmada. Lacagaha CERB waxaa lagu barbardhigay $1,327,070 ee kheyraadka gudaha.
Degmada Grays Harbor - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Grays Harbor ee "Qorshaha Mashruuca Casriyeynta Marina Westport." Mashruucani wuxuu ka kooban yahay qorshe casriyeyn ah oo loogu talagalay kaabayaasha mooreerka ee Marina Westport. Lacagaha CERB waxaa lagu barbardhigay $30,000 ee kheyraadka gudaha.
Gobolka King - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Jidka Federaalka ee "Daraasadda Qorshaynta Balaadhinta Waddada Federaalka." Mashruucani wuxuu ka kooban yahay daraasad macquul ah oo lagu qiimeynayo suurtagalnimada horumarinta isku xirka fiber-xawaare sare ee magaalada ee Waddada Federaalka. Lacagaha CERB waxa la mid ah $25,000 ee maaliyadda dawladda dhexe ee ARPA.
Degmada Xamar - $ 50,000 deeq ah Degmada Nambar 1 ee Adeegga Dadweynaha ee Degmada Whatcom loogu talagalay "Whatcom PUD # 1 Khariidaynta Balaadhinta iyo Daraasadda Suurtogalka." Mashruucani waxa uu ka kooban yahay daraasad ku saabsan suurtogalnimada si loo qiimeeyo suurtogalnimada in la keeno broadband-xawaaraha sare ee Degmada Whatcom. Lacagaha CERB waxaa lagu barbardhigay $12,500 oo ah kheyraadka gudaha.
Degmada Xamar - $ 2 milyan oo deeq ah oo ka timid Sanduuqa Mashaariicda Raasamaal ee Coronavirus Dekedda Bellingham loogu talagalay "Mashruuca Balaadhan ee Miyiga Degmada Whatcom." Mashruucani wuxuu ka kooban yahay dhismo ku dhawaad ​​47 mayl oo fiber dhexda iyo maylka u dambeeya ah ee waqooyiga Whatcom County ee ku teedsan xuduudka Kanada. Adeeg bixiyaha internetku waa Pogozone. Mashruucan ayaa la filayaa in uu abuuro 240 isku xidh oo xawaarahoodu yahay 300/70 Mbps iyo 210 xawli ah 1G/1G, iyada oo saddex adeeg bixiye internet ah ay ka shaqayn doonaan aagga. Lacagaha CERB waxaa lagu barbardhigay $1,000,000 oo ah kheyraadka gudaha.
“Doorka CERB waa in ay ka jawaabto baahiyaha maxalliga ah iyada oo la samaynayo wakhti ku habboon oo go'aanno maalgashi oo caqli-gal ah. Guddigu waxay ku faraxsan yihiin inay la shaqeeyaan mid kasta oo ka mid ah bulshooyinkan si ay u qorsheeyaan mustaqbalka shaqooyinka waaxda gaarka ah iyo isku xidhka ballaadhan ee qoysaska Washington, "ayuu yidhi Guddoomiyaha CERB Randy Hayden.
"CERB waa lamaane lama huraan u ah maalgashadayaasha maxaliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee xoojinta bulshada reer miyiga ah ee Washington," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga ee Gobolka Washington Lisa Brown. “Kaabayaasha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan balaadhinta xarig ballaadhan, waxay muhiim u tahay soo kabashada dhaqaalaha gobolka oo dhan oo siiya fursado dadka oo dhan.”
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ballan-qaadday ku dhawaad ​​$203 milyan oo ay siiso maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi ka abuurmaya in ka badan 36,000 oo shaqo ah, iyo maalgelin raasumaal gaar ah oo dhan $5.8 bilyan - $29-ilaa-$1 ku soo celinta maalgashiga CERB. Akhriso Warbixinta Sharci dejinta CERB 2020.
Laga soo bilaabo 2018, CERB waxa ay $35.8 milyan u ballan-qaadday kaabayaasha ballaadhan ee miyiga ee gobollada iyo qabaa'ilka. Maalgelintan ayaa lagu qiyaasay in ay dhalinayso 20,622 isku xidh oo loo maro 27 mashruuc oo ka kala socda 70 bulshooyinka miyiga ah. Akhriso Warbixinta Sharci-dejinta ee CERB Miyiga Broadband 2020 si aad wax badan ka bartaan.
broadbandFARXADDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahakaabayaashaWar-saxaafadeed
← Soo bandhigida Jorey Stine, Maareeyaha Barnaamijka ee OCVA's Violence Against Women (VAWA) Codsiga Ka-qaybgalka Dadweynaha: Barnaamijka dardargelinta Kooxda hal-abuurka →